Ny lalàna: mampidi-doza sy tsy ara-dalàna ny pôrnôgrafia | Reward Foundation
Home Lalàna Revenge porn
Tranga vaovao vaovao miparitaka haingana mifandraika amin'ny sexting dia ny "pôrnôgrafia valifaty". Io dia fizarana an-tserasera ny sary mitanjaka sy tsy misy fotony tsy misy fanekena amin'ny ezaka hanalam-baraka sy handratra ireo lasibatra, indrindra ny vehivavy. Hitan'ny olona matetika fa sarotra ny manala sary amin'ny Internet. Tranonkala maro fampiantranoana ireo sary no miorina ivelan'ny UK, ary matetika no tsy raharahiana ireo fangatahana fanesorana atiny.
Tamin'ny volana aprily 2017, ny lalàna vaovao momba ny pôrnôgrafia ao Skotlandia dia nanjary teo ambanin'ny Fihetsika mamoa fady sy fanararaotana ara-nofo 2016. Ny sazy farany ambony noho ny fanambarana na fandrahonana hamoaka sary na horonantsary akaiky anao dia fanagadrana 5 taona. Ilay fahotana dia misy ny sary nalaina tany amin'ny toerana tsy misy olona miboridana, na manao atin'akanjo fotsiny na mampiseho olona manao firaisana.
Ny pôrnôgrafia valifaty koa dia heloka bevava any Angletera sy Wales. Israel no firenena voalohany nanerana an'izao tontolo izao nanao izany tsy ara-dalàna ary nihevitra azy io ho toy ny heloka amin'ny lahy sy ny vavy. Ny sazy, raha meloka, dia hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina. Nametraka volavolan-dalàna hanamelohana azy io tsy ara-dalàna koa i Brezila. Any Etazonia, New Jersey sy California dia mitarika any amin'ny farany tanjona. Tany Canada, tovovavy iray 17 taona no voaheloka ho nanana pôrnôgrafia zaza taorian'ny nanaparitahany ny sarin'ilay sakaizany taloha sakaizany tamin'ny fialonana.
Ny loharanom-pahalalana hanampy dia misy ny Valio ny fanampiana sary vetaveta ary Fanampiana vehivavy Scottish.
<< Iza no ataon'ny Sexting? Ny fiakaran'ny heloka bevava >>